चितवनमा कोरोना उपचार काम जोखिम, भत्ता आश्वासनमै सिमित ! – Saurahaonline.com
चितवनमा कोरोना उपचार काम जोखिम, भत्ता आश्वासनमै सिमित !
ध्रुवराज खनाल, चितवन : जब काेराेना भाइरस (काेभिड १९) काे प्रभाव बढ्दै गयाे, परिक्षणका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा प्रयोगशाला धमाधम स्थापना भए । कोरोना भित्रिसक्दा चितवनमा भने प्रयोगशाला थिएन । निकै दवाबपछि सरकारले प्रादेशिक प्रयोगशालाको रुपमा भरतपुर कोरोना प्रयोगशाला स्थापना गर्यो ।
मुलुकको केन्द्र भागमा भएर पनि होला यस प्रयोगशालामा छिमेकी जिल्लाहरुबाट अत्याधिक मात्रामा स्वाब आउन थाले । दिनरात नभनि यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिकहरु खटे । जोखिमको क्षेत्र भएकाले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकहरुलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गर्यो ।
सरकारले निर्णय त गर्यो तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘दिनरात नभनी काम गरिरहेका छाैँ तर प्रोत्साहनका लागि सुविधा पाइएकाे छैन । भत्ता दिनु भनेर पटक पटक पत्राचार भएपनि अझै पाइएन,’ भरतपुर कोरोना प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर नितु अधिकारीले भनिन् ।
प्रयोगशाला भरतपुर अस्पतालको मातहतमा छ । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । प्रयोगशालाका चिकित्सक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरु विगत चार महिनादेखिको जोखिम भत्ता पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । अस्पताल प्रशासनले जोखिम भत्ता दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म नदिएपछि उनीहरुले साधारण तोकिएको डिउटी मात्रै गरेका छन् । डाक्टर अधिकारी भन्छिन्, ‘पैसाकै लागि काम गर्ने भन्ने होइन, नागरीकको सेवामा दिनरात खटेको उदाहरण छन् । तर जोखिम क्षेत्रमा काम गर्दा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो ।’
सो प्रयोगशालामा अहिले विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म स्बाव परिक्षण गरिँदै आएको छ । यसअघि रातको समयमा पनि परिक्षण हुँदै आएको थियो । भरतपुर अस्पतालले अफिस टाईममा मात्र परिक्षण गर्नु भनेकाले सोही अनुसार काम गरिरहेको डाक्टर अधिकारीले बताइन् । अहिले सरदर १५० वटा स्याम्पल परिक्षण भईरहेको छ । चाप रहेका बेला २४ घण्टामा ५ सय ७६ वटा स्याम्पल पनि परिक्षण गरिएको अनुभव सुनाउँछिन् प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर अधिकारी ।
अहिले चितवन जिल्लाको मात्रै स्वाब परिक्षण भइरहेको छ । यसअघि अर्घाखाँची लगायत बाहिरी जिल्लाको समेत स्वाब परिक्षण गरिएको थियो । आफूहरुको माग अस्पताल प्रशासनसँग राखेको भएपनि हाल सम्म प्राप्त गर्न नसकिएको उनले बताइन् । चाप रहेका बेला सो प्रयोगशालामा १६ जनासम्म प्राविधिक खटिएका थिए अहिले ९ जना मात्र छन् ।
यता भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले जोखिम भत्ता कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग माग गरिएको बताए । उनले अहिलेसम्म कसैलाई पनि जोखिम भत्ता नदिइएको बताएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकामा काम गर्ने प्रशासनिक कर्मचारीदेखि पियनसम्मले असार महिनामा नै कोरोना जोखिम भत्ता लिएका छन् । महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम वापतको जोखिम भत्ता भन्दै १०२ जना कर्मचारीलाई २१ लाख ९३ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ भत्ता बाँडेको जनाएको छ ।